Igumbi lokulala elinye eliphefumlelweyo langoku leRetreat yelizwe
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFrancis
Eli gumbi lokulala lilinye linesitayile sale mihla liku-2.3 ebiyelwe kwaye inesango leehektare ezinendlela egangathiweyo yokungena kwindlela yokungena. Eyona ifanele iindwendwe ezikhulileyo ezithe cwaka ezingathanda ukumisa ebusuku ukuze ziphumle. Ipropathi kwabelwana ngayo, iyunithi yabucala kodwa idityaniswe kwenye iyunithi yesiphelo esincinci enodonga oluqinileyo oluphindwe kabini, olufana ne-duplex okanye indlu. Isiphelo esiqhotyoshelweyo kodwa esahlukileyo singasetyenziswa ngexesha lotyelelo.
Nceda ufunde icandelo elingezantsi elinesihloko esithi "Isithuba" ngolwazi oluthe kratya :)
Indawo esembindini ekwindawo entle yaseWest Golden Valley, malunga nesiqingatha phakathi kweKingman AZ kunye neLaughlin NV, ekufutshane neeNtaba eziMnyama ezibukekayo, eli gumbi linye lokulala "kwiyunithi yesitayile sasekhaya" linombono omangalisayo wokutshona kwelanga ukuya eNtshona ukusuka kumgangatho ongaphambili. Zonke ezisanda kuhlaziywa ngezinto zangoku, ikhitshi elisebenza ngokupheleleyo elinesitovu sepropane, imicrowave, itoaster, 20 cubic ft Samsung fridge, ikomidi eyodwa yekomityi yekomityi yekomityi (ekwathatha indawo) (zombini zibonelelwe iindwendwe kunye ne-French press kunye nebhoyila yamanzi. ) Iilitha ezi-5 zamanzi okusela ahlambulukileyo / i-dispenser, i-intanethi engenazintambo, i-closet kwigumbi lokulala elinama-hangers, idesksi, iwashi ye-alarm enezibuko zokutshaja ze-USB kwiselfowuni yakho, i-55 "iTV kunye ne-30 +/- iziteshi ze-TV zedijithali kwigumbi lokuhlala kunye ne-ROKU TV kunye INetflix, kunye ne-50" yeTV enezitishi zedijithali ezifanayo ezingama-30+/- kunye ne-ROKU TV kunye neNetflix kwigumbi lokulala. Le suite ikhanya kakuhle ebusuku kunye nesibane sesikhukula se-LED kwindawo yokungena. Ngaphandle kokudlula kwemoto ngamaxesha athile, ipropathi kunye nendawo izolile kwaye izolile. Iifestile ezininzi zivumela ukukhanya okuninzi, okanye zingavalwa ukuba zibucala. Indawo yabucala, iminyango yangaphambili nangasemva kuphela kokungena/ukuphuma. Akukho zingcango zangaphakathi eziyidibanisa neyunithi yendlu yesitudiyo esidityanisiweyo kwisiphelo esisemazantsi. Amagumbi okulala kule ndawo abheke ngasemantla, ke ngoko ayabelani ngodonga oludityanisiweyo neyunithi yesitudiyo esisemazantsi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala kuphela. Iyunithi yesitudiyo sokuphela kweSouth inokuthi okanye ingahlali zezinye iindwendwe ngexesha lokuhlala kwakho. Le yiyunithi yasimahla yesilwanyana kunye nesilwanyana, ngoko ke igcinwe icocekile kakhulu. I-mattress kwigumbi lokulala yi-queen size foam kunye ne-1.5 "topper yokulala induduzo. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngodonga lwayo olufakwe kwi-AC ene-remote, ngoko ngocango lwegumbi lokulala luvaliwe, ukupholisa yimpepho kwaye kulula ukuphakamisa, ukuthoba. okanye uvale ungakhange uphume ebhedini kukho nesofa enye egcweleyo kwigumbi lokuhlala nekulula ukulala kuyo.
Ukuhlamba iimpahla kufumaneka ngesicelo kuphela ngexabiso le-$ 5 umthwalo wokuhlamba kunye nokomisa. Ukuba ungathanda ukusebenzisa iwasha kunye nesomisi ngexesha lokuhlala kwakho, nceda wazise umamkeli xa usenza ubhukisho kwaye bayakunikwa amandla kunye nemiyalelo emifutshane yokusetyenziswa kwabo :)
Yinjongo yam ukuba neendwendwe ezonwabileyo ezonwabileyo eziziva zisekhaya, ke ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba kukho nantoni na endinokuyenza ukwenza utyelelo lwakho lukhululeke ngakumbi okanye kukho into eqhawukayo, okanye alusebenzi kakuhle endlwini okanye luziva “lucimile” , ndithumele nje umyalezo, kwaye ndiya kwenza konke okusemandleni am ukuze ndifumane indawo yokuhlala! Ndidla ngokufumaneka kude kube ngu-1 AM okanye naliphi na ixesha emva kwe-10 AM kwiiyure zakusasa!
Enkosi, kwaye uhlale kamnandi!
4.97 · Izimvo eziyi-109
Ubumelwane buhlala kakhulu ngabantu abadala abasele besidla umhlala-phantsi. Abaninzi abanamandla kangako, ngoko iiyadi zabo zingasebenzisa uthando, kodwa kule minyaka emine ndihlala kule ndawo, andizange ndidibane nomntu endikhe ndanenqaku elimuncu. Kukho ummelwane omnye kanye emva kwendlu (ndimbone kabini kuphela eyadini kulo nyaka) kwaye kukho abanye abamelwane ababini kuphela kufutshane. Zombini malunga neehektare ezintathu kude. Omnye unamahashe, ukanti omnye yintsapho encinci entle. Ndiva ihashe lizilolonga ngokuhlwa ngamanye amaxesha kwaye kwelinye icala abantwana baye batyhafe bedlala eyadini yabo ngamanye amaxesha. Umphambili wendlu ojonge eNtshona ngaphaya kwendawo yokungena, ngumhlaba ongaphuhliswanga umgama olungileyo, owenzela ukutshona kwelanga okuphefumlayo!
Umbuki zindwendwe ngu- Francis
Zihlole ngokwakho ngebhokisi yokutshixa. Ubumfihlo bunikwa zonke iindwendwe